ကမ္ဘာကျော် Celebrity မေမေနဲ့ သမီးတို့ရဲ့ အရွယ်တူတုန်းကပုံရိပ်များ
23 May 2018 . 3:58 PM
Kim Kardashian၊ Gigi နဲ့ Bella Hadid၊ Dakota Johnson နဲ့ Kaia Gerber တို့လို ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေ၊ မော်ဒယ်လ်တွေ၊ မင်းသမီးတွေရဲ့ အလှအပနဲ့ အရည်အသွေးကတော့ Hollywood မှာသာမက ကမ္ဘာအနှံ့မှာပါ နာမည်ကြီးထင်ရှားပါတယ်။ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးအလှကြောင့် နာမည်ကြီးကြတာဟာလည်း တစ်ပိုင်းဆိုပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အနုပညာရှင် မိခင်တွေဆီက စီးဆင်းလာတဲ့ အသွင်အပြင်ခပ်ဆင်ဆင် အလှတရားတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ သတိထားမိကြတာဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့်မို့ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ ထိပ်တန်း နာမည်ကြီး မော်ဒယ်လ်၊ မင်းသမီး တွေဆိုတာ တစ်ချိန်က မေမေ့အလှနဲ့ ယှဉ်ရင် မေမေက ပိုအလှသွေးကြွယ်ခဲ့သလား၊ သမီးကပဲ ပိုအလှဖူးတွေဝေနေမလားဆိုတာ ELLE Magazine ကနေ မေမေနဲ့ သမီးတို့ရဲ့ အသက်အရွယ်တူတူတုန်းက ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
(၁) မေမေ Demi Moore နဲ့ သမီး Rumer Willis
ကမ္ဘာကျော် “Ghost” ရုပ်ရှင်ကားကြီးထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေအချစ်ကို စုပြုံရရှိခဲ့တဲ့ Demi Moore နဲ့ သူမရဲ့ သမီးဖြစ်သူ အသက် ၃၀ အရွယ် အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် Rumer Willis တို့ရဲ့ ၂ဦးစလုံး အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်တုန်းက ပုံလေးကို ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ မေမေ့အလှက ပိုနေသလိုပါပဲနော်။
မေမေ Demi Moore နဲ့ သမီး Rumer Willis
(၂) မေမေ Yolanda Hadid နဲ့ သမီးချောများ Gigi နဲ့ Bella Hadid
ဒတ်ခ်ျ အမေရိကန်ရုပ်သံတင်ဆက်သူနဲ့ မော်ဒယ်လ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မေမေ Yolanda Hadid ကတော့ သူ့ခေတ်အခါမှာ အသင့်အတင့်လောက်ပဲ နာမည်ကြီးခဲ့ပေမယ့် သမီးချော ၂ ယောက်ဖြစ်တဲ့ Gigi နဲ့ Bella Hadid တို့ကို ကမ္ဘာကျော် မော်ဒယ်လ်တွေဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်သူပါ။ ဒီပုံလေးကတော့ မေမေ Yolanda အသက် ၂၁ အရွယ်နဲ့ သမီး Gigi ၂၁ အရွယ်ဖြစ်ပြီး Bella က ၁၉ နှစ်အရွယ် ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ မေမေ ပိုလှလား သမီးတွေ ပိုချောတာလား ဝေခွဲမရပါပဲနော်။
မေမေ Yolanda Hadid နဲ့ သမီးချောများ Gigi နဲ့ Bella Hadid
(၃) မေမေ Cindy Crawford နဲ့ သမီး Kaia Gerber
Hollywood Star Cindy Crawford ဆိုတာကတော့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်နေစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး။ မော်ဒယ်မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ အမေရဲ့ ခြေရာကို အမီလိုက်နိုင်သူလေးကလည်း နာမည်ကြီးမော်ဒယ်လ် Kaia Gerber ပါ။ ဒီပုံကတော့ မေမေ Cindy အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်နဲ့ သမီး Kaia အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ယှဉ်ပြထားတဲ့ ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ မေမေရောသမီးရော ချွတ်စွတ်တူတဲ့ အလှမျိုးပါ။
မေမေ Cindy Crawford နဲ့ သမီး Kaia Gerber
(၄) မေမေ Reese Witherspoon နဲ့ သမီး Ava Phillippe
မြန်မာပရိသတ်နဲ့ မစိမ်းတဲ့ ဆံပင်ရွှေရောင်ဖျော့ဖျော့မင်းသမီးလေး Reese Witherspoon ဟာဆိုရင် ခုဆို အသက် ၄၂ နှစ်ထဲဝင်လို့ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် သမီးလေး Ava Phillippe တောင် အလှသွေးကြွယ်နေပါပြီ။ ဒီပုံကတော့ မေမေနဲ့ သမီးလေး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညီအမလားထင်မှတ်ရအောင် တူနိုင်လွန်းပါတယ်။
မေမေ Reese Witherspoon နဲ့ သမီး Ava Phillippe
(၅) မေမေ Goldie Hawn နဲ့ သမီး Kate Hudson
နာမည်ကြီး မင်းသမီးကြီး Goldie Hawn နဲ့ သမီးချော Kate Hudson တို့ရဲ့ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်အလှတွေကရော ဆွဲဆောင်မှု ညို့ဓါတ်အပြည့်နဲ့ ကိုယ်စီအလှပြိုင်နေတာ ငြင်းမရနိုင်ပါဘူး။
မေမေ Goldie Hawn နဲ့ သမီး Kate Hudson
(၆) မေမေ Carrie Fisher နဲ့ သမီး Billie Lourd
နာမည်ကြီးမင်းသမီးနဲ့ ဟာသပညာရှင် Carrie Fisher နဲ့ သမီးချော Billie Lourd တို့ရဲ့ပုံတွေကတော့ သူ့ခေတ်သူ့အခါရဲ့ အလှတရားကိုယ်စီကို ဖော်ညွှန်းနေသလိုပါပဲ။ ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေအမြင်တော့ သမီး Billie က ပိုလှနေသယောင်ပါပဲနော်။
မေမေ Carrie Fisher နဲ့ သမီး Billie Lourd
(၇) မေမေ Melanie Griffith နဲ့ သမီး Dakota Johnson
Dakota Johnson ဆိုတာကတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေ မစိမ်းတဲ့ Fifty Shades of Grey ကားထဲက မင်းသမီးချောလေးပါ။ ဒီပုံလေးကတော့ သူမရဲ့ မေမေ Melanie Griffith နဲ့ သူမတို့ရဲ့ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ပုံလေးတွေ ယှဉ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်တမျိုး အလှတိုးနေတဲ့ သားအမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
မေမေ Melanie Griffith နဲ့ သမီး Dakota Johnson
(၈) မေမေ Kris Jenner နဲ့ သမီး Kim Kardashian
Kardashian မိသားစုကတော့ အနုပညာလောကမှာ အရှိန်အဝါကြီးသလို အလှအပမှာလည်း ပြောစမှတ်တွင်ရသူတွေပါ။ ဒီပုံလေးထဲမှာတော့ မေမေ Kris Jenner နဲ့ သမီး Kim Kardashian တို့ရဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်တွေကို ယှဉ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သမီးက ပိုချောနေတယ်ဟုတ်?
မေမေ Kris Jenner နဲ့ သမီး Kim Kardashian
(၉) မေမေ Meryl Streep နဲ့ သမီးများ Mamie, Grace နဲ့ Louisa
နာမည်ကြီး ထိပ်တန်း မင်းသမီးချောကြီး Meryl Streep ကတော့ အသက်ကြီးလာတာတောင် နုပျိုနေဆဲအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ သမီးတွေဖြစ်တဲ့ Mamie၊ Grace နဲ့ Louisa တို့ထက်တောင် ချောမောနေသေးတာကို မေမေ့အသက် ၃၂ နဲ့ သမီး Mamie အသက် ၃၂ နှစ်၊ Grace ၂၉ နှစ်၊ Louisa ၂၄ နှစ် စတဲ့အရွယ်ချင်း ယှဉ်ပြထားတဲ့ ဒီပုံလေးကို ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။
မေမေ Meryl Streep နဲ့ သမီးများ Mamie, Grace နဲ့ Louisa
(၁၀) မေမေ Jerry Hall နဲ့ သမီး Georgia May Jagger
မော်ဒယ်လ်နဲ့ မင်းသမီးချော Jerry Hall ကတော့ သူ့ခေတ်သူ့အခါက နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး ခုချိန်မှာတော့ သမီးချောလေး Georgia May Jagger ကိုပါ မော်ဒယ်လ်ပညာတွေ လက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးကတော့ မေမေနဲ့ သမီးရဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်တုန်းက ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ တကယ်လှတဲ့ အမေတူသမီးလို့ ဆိုရမလိုပါပဲ။
မေမေ Jerry Hall နဲ့ သမီး Georgia May Jagger
ဒီပုံလေးတွေကတော့ မေမေ့ခေတ်နဲ့ သမီးတို့ခေတ်ရဲ့ အလှတရား ၂ ခုကို ယှဉ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သူ့ခေတ်သူ့အခါနဲ့ အညီ အောင်မြင်မှုအလီလီ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်လာနိုင်တဲ့ နာမည်ကြီး ထိပ်တန်း မင်းသမီးမေမေနဲ့ သမီးတို့ရဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်မေမေက ပိုချောပြီး ဘယ်သမီးက ပိုလှနေတာလဲဆိုတာ ပြောသွားဦးနော်။
ကမ်ဘာကြျော Celebrity မမေနေဲ့ သမီးတို့ရဲ့ အရှယျတူတုနျးကပုံရိပျမြား
Kim Kardashian၊ Gigi နဲ့ Bella Hadid၊ Dakota Johnson နဲ့ Kaia Gerber တို့လို ဒီနခေ့တျေရဲ့ နာမညျကွီး အဆိုတျောတှေ၊ မျောဒယျလျတှေ၊ မငျးသမီးတှရေဲ့ အလှအပနဲ့ အရညျအသှေးကတော့ Hollywood မှာသာမက ကမ်ဘာအနှံ့မှာပါ နာမညျကွီးထငျရှားပါတယျ။ ပငျကိုယျအရညျအသှေးအလှကွောငျ့ နာမညျကွီးကွတာဟာလညျး တဈပိုငျးဆိုပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ အနုပညာရှငျ မိခငျတှဆေီက စီးဆငျးလာတဲ့ အသှငျအပွငျခပျဆငျဆငျ အလှတရားတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှေ သတိထားမိကွတာဆိုလညျး မမှားပါဘူး။
ဒါ့ကွောငျ့မို့ ဒီနခေ့တျေရဲ့ ထိပျတနျး နာမညျကွီး မျောဒယျလျ၊ မငျးသမီး တှဆေိုတာ တဈခြိနျက မမေအေ့လှနဲ့ ယှဉျရငျ မမေကေ ပိုအလှသှေးကွှယျခဲ့သလား၊ သမီးကပဲ ပိုအလှဖူးတှဝေနေမေလားဆိုတာ ELLE Magazine ကနေ မမေနေဲ့ သမီးတို့ရဲ့ အသကျအရှယျတူတူတုနျးက ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ယှဉျတှဲမြှဝခေဲ့ပါတယျ။
(၁) မမေေ Demi Moore နဲ့ သမီး Rumer Willis
ကမ်ဘာကြျော “Ghost” ရုပျရှငျကားကွီးထဲမှာ သရုပျဆောငျရငျး ပရိသတျတှအေခဈြကို စုပွုံရရှိခဲ့တဲ့ Demi Moore နဲ့ သူမရဲ့ သမီးဖွဈသူ အသကျ ၃၀ အရှယျ အဆိုတျော၊ သရုပျဆောငျ Rumer Willis တို့ရဲ့ ၂ဦးစလုံး အသကျ ၂၇ နှဈအရှယျတုနျးက ပုံလေးကို ယှဉျကွညျ့တဲ့အခါ မမေအေ့လှက ပိုနသေလိုပါပဲနျော။
မမေေ Demi Moore နဲ့ သမီး Rumer Willis
(၂) မမေေ Yolanda Hadid နဲ့ သမီးခြောမြား Gigi နဲ့ Bella Hadid
ဒတျချြ အမရေိကနျရုပျသံတငျဆကျသူနဲ့ မျောဒယျလျဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ မမေေ Yolanda Hadid ကတော့ သူ့ခတျေအခါမှာ အသငျ့အတငျ့လောကျပဲ နာမညျကွီးခဲ့ပမေယျ့ သမီးခြော ၂ ယောကျဖွဈတဲ့ Gigi နဲ့ Bella Hadid တို့ကို ကမ်ဘာကြျော မျောဒယျလျတှဖွေဈအောငျ ပွုစုပြိုးထောငျနိုငျသူပါ။ ဒီပုံလေးကတော့ မမေေ Yolanda အသကျ ၂၁ အရှယျနဲ့ သမီး Gigi ၂၁ အရှယျဖွဈပွီး Bella က ၁၉ နှဈအရှယျ ပုံလေးဖွဈပါတယျ။ မမေေ ပိုလှလား သမီးတှေ ပိုခြောတာလား ဝခှေဲမရပါပဲနျော။
မမေေ Yolanda Hadid နဲ့ သမီးခြောမြား Gigi နဲ့ Bella Hadid
(၃) မမေေ Cindy Crawford နဲ့ သမီး Kaia Gerber
Hollywood Star Cindy Crawford ဆိုတာကတော့ အထူးတလညျ မိတျဆကျနစေရာတောငျမလိုတော့ပါဘူး။ မျောဒယျမိခငျကွီးဖွဈတဲ့ အမရေဲ့ ခွရောကို အမီလိုကျနိုငျသူလေးကလညျး နာမညျကွီးမျောဒယျလျ Kaia Gerber ပါ။ ဒီပုံကတော့ မမေေ Cindy အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျနဲ့ သမီး Kaia အသကျ ၁၆ နှဈအရှယျ ယှဉျပွထားတဲ့ ပုံလေးဖွဈပါတယျ။ မမေရေောသမီးရော ခြှတျစှတျတူတဲ့ အလှမြိုးပါ။
မမေေ Cindy Crawford နဲ့ သမီး Kaia Gerber
(၄) မမေေ Reese Witherspoon နဲ့ သမီး Ava Phillippe
မွနျမာပရိသတျနဲ့ မစိမျးတဲ့ ဆံပငျရှရေောငျဖြော့ဖြော့မငျးသမီးလေး Reese Witherspoon ဟာဆိုရငျ ခုဆို အသကျ ၄၂ နှဈထဲဝငျလို့ အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျ သမီးလေး Ava Phillippe တောငျ အလှသှေးကွှယျနပေါပွီ။ ဒီပုံကတော့ မမေနေဲ့ သမီးလေး ဆယျကြျောသကျအရှယျပုံလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ညီအမလားထငျမှတျရအောငျ တူနိုငျလှနျးပါတယျ။
မမေေ Reese Witherspoon နဲ့ သမီး Ava Phillippe
(၅) မမေေ Goldie Hawn နဲ့ သမီး Kate Hudson
နာမညျကွီး မငျးသမီးကွီး Goldie Hawn နဲ့ သမီးခြော Kate Hudson တို့ရဲ့ အသကျ ၃၇ နှဈအရှယျအလှတှကေရော ဆှဲဆောငျမှု ညို့ဓါတျအပွညျ့နဲ့ ကိုယျစီအလှပွိုငျနတော ငွငျးမရနိုငျပါဘူး။
မမေေ Goldie Hawn နဲ့ သမီး Kate Hudson
(၆) မမေေ Carrie Fisher နဲ့ သမီး Billie Lourd
နာမညျကွီးမငျးသမီးနဲ့ ဟာသပညာရှငျ Carrie Fisher နဲ့ သမီးခြော Billie Lourd တို့ရဲ့ပုံတှကေတော့ သူ့ခတျေသူ့အခါရဲ့ အလှတရားကိုယျစီကို ဖျောညှနျးနသေလိုပါပဲ။ ဒီဘကျခတျေလူငယျတှအေမွငျတော့ သမီး Billie က ပိုလှနသေယောငျပါပဲနျော။
မမေေ Carrie Fisher နဲ့ သမီး Billie Lourd
(၇) မမေေ Melanie Griffith နဲ့ သမီး Dakota Johnson
Dakota Johnson ဆိုတာကတော့ မွနျမာပရိသတျတှေ မစိမျးတဲ့ Fifty Shades of Grey ကားထဲက မငျးသမီးခြောလေးပါ။ ဒီပုံလေးကတော့ သူမရဲ့ မမေေ Melanie Griffith နဲ့ သူမတို့ရဲ့ အသကျ ၂၆ နှဈအရှယျ ပုံလေးတှေ ယှဉျပွထားတာဖွဈပွီး တဈယောကျတမြိုး အလှတိုးနတေဲ့ သားအမိတှပေဲဖွဈပါတယျ။
မမေေ Melanie Griffith နဲ့ သမီး Dakota Johnson
(၈) မမေေ Kris Jenner နဲ့ သမီး Kim Kardashian
Kardashian မိသားစုကတော့ အနုပညာလောကမှာ အရှိနျအဝါကွီးသလို အလှအပမှာလညျး ပွောစမှတျတှငျရသူတှပေါ။ ဒီပုံလေးထဲမှာတော့ မမေေ Kris Jenner နဲ့ သမီး Kim Kardashian တို့ရဲ့ အသကျ ၃၅ နှဈအရှယျတှကေို ယှဉျပွထားတာဖွဈပါတယျ။ သမီးက ပိုခြောနတေယျဟုတျ?
မမေေ Kris Jenner နဲ့ သမီး Kim Kardashian
(၉) မမေေ Meryl Streep နဲ့ သမီးမြား Mamie, Grace နဲ့ Louisa
နာမညျကွီး ထိပျတနျး မငျးသမီးခြောကွီး Meryl Streep ကတော့ အသကျကွီးလာတာတောငျ နုပြိုနဆေဲအလှကို ပိုငျဆိုငျထားသူဖွဈပွီး သူမရဲ့ သမီးတှဖွေဈတဲ့ Mamie၊ Grace နဲ့ Louisa တို့ထကျတောငျ ခြောမောနသေေးတာကို မမေအေ့သကျ ၃၂ နဲ့ သမီး Mamie အသကျ ၃၂ နှဈ၊ Grace ၂၉ နှဈ၊ Louisa ၂၄ နှဈ စတဲ့အရှယျခငျြး ယှဉျပွထားတဲ့ ဒီပုံလေးကို ကွညျ့ရုံနဲ့ သိနိုငျပါတယျ။
မမေေ Meryl Streep နဲ့ သမီးမြား Mamie, Grace နဲ့ Louisa
(၁၀) မမေေ Jerry Hall နဲ့ သမီး Georgia May Jagger
မျောဒယျလျနဲ့ မငျးသမီးခြော Jerry Hall ကတော့ သူ့ခတျေသူ့အခါက နာမညျကွီးခဲ့ပွီး ခုခြိနျမှာတော့ သမီးခြောလေး Georgia May Jagger ကိုပါ မျောဒယျလျပညာတှေ လကျဆငျ့ကမျးအမှပေေးနိုငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ဒီပုံလေးကတော့ မမေနေဲ့ သမီးရဲ့ အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျတုနျးက ပုံလေးတှဖွေဈပါတယျတဲ့။ တကယျလှတဲ့ အမတေူသမီးလို့ ဆိုရမလိုပါပဲ။
မမေေ Jerry Hall နဲ့ သမီး Georgia May Jagger
ဒီပုံလေးတှကေတော့ မမေခေ့တျေနဲ့ သမီးတို့ခတျေရဲ့ အလှတရား ၂ ခုကို ယှဉျပွထားတာဖွဈပွီး သူ့ခတျေသူ့အခါနဲ့ အညီ အောငျမွငျမှုအလီလီ လကျဆငျ့ကမျးသယျလာနိုငျတဲ့ နာမညျကွီး ထိပျတနျး မငျးသမီးမမေနေဲ့ သမီးတို့ရဲ့ အမှတျတရပုံလေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘယျမမေကေ ပိုခြောပွီး ဘယျသမီးက ပိုလှနတောလဲဆိုတာ ပွောသှားဦးနျော။